Homeसमाचारपुण्य गौतम लाइभ स्टुडियोमा गीत गाउँदै (भिडियो हेर्नुहोस्)
October 1, 2020 admin समाचार 13742
आफु’लाई सामाजिक अभि’यन्ताका रुपमा चिनाउने पुण्य गौतम सामाजिक स’ञ्जालमा छाइरहने नाम हो । उनी कुनै न कुनै विषयमा सामाजिक स’ञ्जालमा छाइरहन्छन् ।
कहिले नि’तान्त ब्यक्तिगत र पा’रिवारिक विषयमा धारणा सा’र्वजनिक गर्छन भने कहिले सामाजिक विषयमा नारा’वाजी गर्न माइ’तीघर मण्डला पुग्छन् । नेकपाको का’र्यकर्ता समेत बताउने गौतम कहिले सर’कारले नै गरेको कामका विरुद्ध ना’रावाजी गर्दै गरेका पनि भेटिन्छन् ।
हालै उनी कु’लमान सिसिगंलाई नेपाल विद्युत प्रा’धिकरणमा पुन नियुक्त गर्र्नुपर्छ भन्दै माग राखेर माइ’तीघर मण्ड’लामा नारा’वाजी गर्न पुगेका थिए । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको दृष्य पनि निकै भाइरल भएको थियो । पुण्यलाई प्रहरीले बोकेर हि’डाएको र उनले म बेहुला हो र ? भन्दै गरेको टिप्प’णी निकै भाइरल भएको थियो ।
युट्यु’वमा पैसा कमाउनकै लागि पुण्यलाई विभिन्न विष’यमा धारणा राख्न उक्साउनेहरुको पनि स’मुह छ । उनलाई नै बोल्न लगाएर यु’ट्युव चला’उनेहरु पनि केही समुह छ । हालै एउटा गीत रेकर्ड गर्ने स्टुडियोमा पुगेका पुण्यका बारेमा पनि भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उनले स्टुडिया’मो गीत कसरी रेक’र्ड हुनछ ?
भन्ने वारेमा जानका’री लिएका छन् । उनलाई केही युट्यु’वरहरुले गीत समेत गाउन लगाएका छन् । उनले पनि नारायण गोपालको गीत जानीन’जानी गाउने प्रयास गरेका छन् ।
श्वर र क्ष’मता भएर पनि रकम अभावमा गीत रेकर्ड गर्न नस’केकाहरुलाई मध्यनजर राखेर संचालन गरिएको भनिएको स्टु’डियोमा उनले गरेका कृया’कलाप समेटेर सार्वज’निक भएको भि’डियो पनि चर्चित भएको छ । – इताजा खबर बाट साभार
March 10, 2021 admin समाचार 5662
February 14, 2021 admin समाचार 6722
June 11, 2021 admin समाचार 5254